जेल जान सक्छन् सभामुख सापकोटा ? उनी विरुद्धको मुद्दाको आज सुनुवाइ हुँदै !
काठमाडौ । सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्धको कर्तव्य ज्यान सम्बन्धि मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा न्यायाधीश यो इजलासमा हुनुहुन्छ ।
यसअघि १६ भदौमा पेशीमा चढेको यो मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो । त्यसअघि ३० फागुन २०७६ मा यो मुद्दा पेशीमा चढाइएको थियो । त्यतिबेला पनि हेर्न नभ्याएपछि सुनुवाइ सरेको थियो । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा काभ्रेका अर्जुन लामाको ज्यान लिइएको घटनामा संलग्न भएको आरोप सापकोटामाथि कर्तव्य ज्यान सम्बन्धि मुद्धा लागेको छ ।